I-AutoCAD: Ubeka njani isicatshulwa esingqamene ne-arc-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/I-AutoCAD: Indlela yokubeka umbhalo ohambelana ne-arc
I-AutoCAD: Indlela yokubeka umbhalo ohambelana ne-arc
Masicinge ukuba sinombhalo, esifuna ukuwubeka kwi-arc. Isebenza phantse njengeCorel Draw, ndisebenzisa i-AutoCAD 2009 nangona umthetho mdala kuneAlmeida bakhe ngobuwula kodwa ndiyifumana emva kokubona imibuzo emininzi kwiifom kunye neempendulo ze-Yahoo.
1 I-Arctext Command
Kuye kwaziwa ngokufanayo njengeArcAlignedText
2 Sikhetha i-arch
3 Sibonisa iimpawu zesicatshulwa
Ilungelelaniswe ngakwesokunene, ekhohlo okanye ehlengahlengisiweyo
Ukucinywa kombhalo okanye ukuphela
Yaye ke, faka umbhalo owufunayo; Kule meko ndibeka nina egeomates
4 U lungele
Isicatshulwa sinokulungiswa, ngokusebenzisa umyalelo ofanayo kunye nokuyichukumisa, okanye ngokuvula ipaneli yeepropati.
Kukho, kwi ukufunda kuqala 🙂
Inkambo yeCadastre, usuku lokuqala
Umhlaba oqinisekileyo, uhlaziyo lomfanekiso ngo-Epreli 2009
Ayikwazi. Into onokuyenza ukuyikhuphela kwakhona http://students.autodesk.com/ kwaye wenze njengomfundi, nento onokuyenza ukuya kwiminyaka emithathu.
Ndifake i-autocad 2012 kwikhompyutheni yam kodwa emva kokuba ixesha lokuva liphelelwe, ndingayilungisa njani kwakhona?
Ukucela uxolo Acetmain.cui kodwa wongeza ifayile kunye Express Izixhobo iribhoni ifakiweyo, eli iqhosha lomyalelo Arctext kodwa xa uyiqhuba isixelela ukuba akukho myalelo. Uya kuphoswa?
URene Velez uthi:
Ndenze iikhosi ezi-2 ze-autocad (ngo-2006 no-2008) kwaye akukho namnye kubo owayendifundisile lo myalelo kwaye ngokokubona kwam iluncedo kakhulu ... Enkosi kakhulu. Khange ndibenangxaki zininzi ukusukela ukwenza ulungelelwaniso lomntu kufuneka adlale ngamanqanaba aphakamileyo nayo yonke into kwaye sele ndinokumiselwa kwam kunye nendlela yokwenza entsha ekubekweni kokubhaliweyo kwe-arc ... Ukuba unayo eminye imiyalelo singavuya kakhulu kuthi sonke xa sityelela ezi ndawo Qhubeka ufunda kule nkqubo inzima kodwa iluncedo njenge-AUTOCAD ... Ndiyabulisa
Molo enkosi ngempendulo endinayo ngo-2009, ingxaki kukuba ndifumene ukuba ukusuka kwi-autocad 2007 i-EXPRESS TOOLS (ithebhu apho umyalelo we-Arctext ufunyenwe) awusekho kwiithebhu eziphezulu, ngoko kufuneka ukhuphele ifayile eyahlukileyo ebizwa ngokuba yi "acetmain". .cui” kwaye emva koko uyifake kwaye ulungele ukuqala kwakhona i-autocad kwaye ufumana ithebhu entsha ngokucacileyo IZIXHOBO ZOKUXHLELA.
Inyaniso, bulela kakhulu ngokuphendula ngokukhawuleza
Yaye yeyiphi inguqu ye-AutoCAD enayo?
Molo uxolo KULE Soy NOVATO AutoCAD KNOW Andimfumananga umyalelo nokuba ukubeka umyalelo igama kengoku undixelele ayisebenzi INYATHELO ngenyathelo kuloo BAR OKANYE nesimbo LO Arctext Sibonga ngaphambili
Ndifuna ukushiya le ngcaciso malunga namaqela apho ungabelana khona ngezimvo kwaye ke ufunde. Ngokwam ndiyithandile yonke into oyivezileyo kwaye wenze umsebenzi obalaseleyo, ubungcali, enkosi kwaye ndikuxelele ukuba ndiyaqala ukuyeka namhlanje kwaye ndiyazi ukuba basekhona abantu abalungileyo. Ndiyabulela kuwe kwakhona, unayo i-imeyile yam xa ufuna ukuba nezimvo David
Bekuya kuba kuhle ukuba utshintsha igama myalelo Arctext ukuzibona kuyo kwi bar umyalelo igama elipheleleyo ayisebenzi kakuhle ezenzeka kum Cad 2007 yam enkosi a iagual icebiso lam I sakhonza
Hahahaha Kwaye utsho 😀